हामी किन अदालत गयौँ र किन निर्वाचनमा सहभागी हुदैनाैँ ? |
एनआरएन क्यानडा बिबाद किन ?
गैर-आवासिय नेपाली संघ क्यानडाको आसन्न निर्वाचन प्रक्रिया लिएर यति बेला क्यानडा तरंगीत बनेको छ । सदस्यता बितरण सँगै निर्वाचन क्षेत्र बिभाजनको बिषयले चर्को रुप लिएको छ । २ दिनलाई स्थगित गरिएको चुनावी प्रक्रियालाई अधक्ष्यको निर्देशनमा सुचारू भएको छ भने उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया पनि सकिसकेको छ । समस्या समाधान गर्ने भन्ने नाममा NRN का पदाधिकारीहरु बाट केहि नाटकिय प्रयासहरु अन्तिम घडी सम्म भैरहेको अवस्था हो ।
सबैलाई थाहा छ, वर्तमान एनआरएन क्यानडाका बिरुद्ध अदालतमा मुद्धा दर्ता भैसकेको छ । हामी आफै आजीवन र साधारण सदस्य बनेर हाम्रा अग्रजहरुले निस्वार्थ यहाँ सम्म पुर्याएको क्यानडा बासि आप्रबासी नेपालीहरुको साझा छाता संगठन एनआरएन-क्यानडा बिरुद्ध अदालतमा हामी कुनै रहर, उक्साहट र लहैलहैमा पुगेको होईन । वर्तमान एनआरएन नेत्तृत्वको अकर्मण्यताको कारण यो स्थिति श्रृजना भएको हो ।
सदस्यता बितरण र यसको प्रकासन सँगै चुनावी क्षेत्र बिभाजन प्रकासमा आयो । मतदाताको आधारमा नजिकका शहरहरुलाई पनि चुनावी क्षेत्रमा सहभागी गराउने प्राबधान विपरित बिगत १० बर्ष देखी एउटै चुनावी क्षेत्र रहँदै आएको क्यानडाको सबै भन्दा ठुलो शहर टोरोन्टोलाई २ वटा क्षेत्रमा बिभाजन गरियो । चुनाव हुनु एक केहि दिन अगाडी गरिएको यो अव्यबहारिक निर्णयले टोरोन्टोको स्कारबोरो क्षेत्र वरपर बस्ने आम मतदाताहरुलाई यो आकस्मिक झट्काको बिषय बन्यो । यसको बारेमा सोधखोज हुन थाल्यो । वर्तमान कार्यसमितिमा टोरोन्टो – स्कारबोरो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुसँग यस बारेमा अनौपचारिक छलफल पनि भए । यसको औचित्य पुस्टी गर्न आग्रह गरिए । जवाफमा “स्कारबोरोलाई गुगुलमा हालेर हेर्दा छुट्टै नक्सा देखियो” रे । “प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले उक्त कुरालाई बैधानिकता दिदै छुट्टाउने कुरामा सिफारिस गरे” सगै “छुट्टै नक्सा देखिए पछि मतदाता हेर्दा २५० भन्दा बढी भए पछि स्कारबोरोलाई छुट्टाउने बलियो आधार बन्यो” ।
टोरोन्टो-स्कारबोरो क्षेत्र (टोरोन्टो डाउनटाउन, ईटोबिको, ईस्टयोर्क, नर्थयोर्क र स्कारबोरो) मिलेर बनेको शहर हो । यहाँकै जति मतदाता अहिलेको ब्राम्पटनमा छन । ब्राम्पटन सँग अरेन्जभिले र क्यालेडन समेत जोडिएको छ । संस्थाको बिधानले नगरहरु र यस वरिपरिका नगरहरुको सहभागिताको लागि स्पस्ट सँग व्यबस्था गरेको छ । मतदाताको आधारमा ठुला नगर क्षेत्र र यस वरिपरिका नगर क्षेत्रहरुलाई प्रतिनिधित्वको लागि ठुला नगरमा समाबेश गरि सहभागि गराउने । तर यहाँ मतदाता कम भएका टोरोन्टो वरपरका क्षेत्र जस्तै अरोरा, मार्खम र एज्याक्सलाई प्रतिनिधित्व गराउन टोरोन्टोलाई टुक्राईएको छ । टोरोन्टोका मतदाताहरुको ३ जनालाई मतदान गर्ने अधिकारलाई खुम्चाईएको छ । अरोरा ब्राम्पटन र मार्खम र एज्याक्सलाई टोरोन्टोमा जोडी व्यबहारिक रुपमा क्षेत्र बिभाजन गर्नु पर्नेमा यसरि जबरजस्ती गर्नु चुनावको मुखमा कति न्यायोचित हो? सम्बन्धित निकायबाट जबाफ खोजेका हौं । हामी हाम्रो क्षेत्रको सरोकार मात्र होईन थन्डर बेका मतदाताहरुलाई ओटवामा जोड्ने, र उनीहरुलाई प्रतिनिधि बिहिन बनाउने कुरामा पनि हो । टोरोन्टो एउटा क्षेत्र टुक्राएर चार जना प्रतिनिधि यहाँ बाट जाने भएको भए प्रतिनिधित्वको कुराको अर्थ रहन्थ्यो होला, यसरि टुक्राउनुले मताधिकार माथिको प्रहार हो भन्ने हाम्रो निस्कर्ष हो ।
उक्त निर्णय प्रति पुर्ण असहमत हुदै हामी संस्थाका अधक्ष्यलाई सम्बोधन गरि यो निर्णय अबिलम्ब सच्चाउन लिखित रुपमा जुलाई ७ गते सो कुरा सच्याउन माग गर्दै, दस गते सम्मको समय सिमा दिदै अनुरोध गर्यौ । जुलाई ८ गते ऐनसिसिएसको (NCCS) पिकनिक कार्यक्रममा अनौपचारिक कुराकानी हरु पनि भए । जुलाई १० गते अधक्ष्यबाट समय थपको माग भयो । जुलाई ११ गते अन्जनी भट्टराईलाई ईमेल लेख्दै हाम्रा मागहरु अस्वीकार गरेको जानकारी एनआरएन क्यानडाका अधक्ष्य तुलसी प्रसाद सापकोटा बाट प्राप्त भयो ।
हाम्रो सरोकारको सुनुवाई नहुने निश्चित भए पछि जुलाई १२ गते हामीले संस्थाका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरि हामी न्यायको लागि न्यायलयको ढोकामा जान बाध्य हुदैछौ भन्ने लिखित जानकारि गराएका थियौ। जुलाई १३ गते हामी बाध्य भएर अदालतमा निवेदन लिएर गएका हौं । न्यायका लागी न्यायलय जाँदा जाँदै पनि हामी छलफल र सहमतिको लागी तयार रहि रह्यौ ।
उक्त बिषय अदालतमा प्रबेस गरे सँगै जुलाई १४ गते शुक्रबार संस्थाको आकस्मिक बोर्ड बैठक बस्यो । बैठकले समस्या समाधानको लागी कुनै नतिजामा पुग्न नसकेपछि अधक्ष्य, महासचिव र बोर्ड सदस्य गरि ३ सदस्सिय वार्ता समिति गठन गरी हामीलाई वार्ताको लागी मौखिक जानकारी आयो । समस्या समाधानका लागी समिती गठन गरेको प्रति उत्साहित हुदै जुलाई १५ गते शनिबार दिउँसो २ बजे ईटोबिको को टिमहर्टनमा हामी वार्ताको लागी गयौं ।
हाम्रो माग यति बेला एउटा मात्रै हो । स्कारबोरोलाई टोरोन्टोबाट छुट्टाउने निर्णय अविलम्ब फिर्ता गरियोस र निर्वाचन प्रकृयामा गईयोस । आफुलाई मन लाग्दो आम सदस्यहरुको चाहना विपरित गलत समयमा क्षेत्र निर्धारण गर्न पाईदैन । संस्था पद्दति, नियम र कानुनले चल्नु पर्छ, कसैको क्षणिक लाभ र हानीको लेखाजोखामा चल्नु हुदैन । सदस्यहरुको प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई अपहरण गर्न पाईदैन भन्ने हो । यहि कुरा त्यहाँ राख्यौ । शक्तिशाली भनिएको एनआरनको वार्ता समिति आफैमा बिबादित थियो । २ जनाले निर्णय गर्ने म्यानडेट हामीलाई छ भन्ने भने अर्को सदस्यले अहिले निर्णय गर्न सकिदैन भन्ने । टोरोन्टो र स्कारबोरोको सिमांकन प्रकिर्या गलत भएको स्वीकार गर्ने तर बोर्डले पास गरि सकेको कुरा अब सच्याउन नसकिने भनेर असमञजस्य को परिस्तिथि सृजना गर्ने काम भयो । NRN का वार्ता टोलिबाट उनीहरुका मतान्तर बिच हामीहरु अनिर्णित रुपमा फर्किन बाध्य बन्यौ । साँझ ६-७ बजे सम्म लिखित जानकारी पाउने आस्वासन लिएर फर्केका थियौ ।
साँझ ६ बजे निर्णयको प्रतिक्षा गर्दा गर्दै एक तर्फी रुपमा वार्ता टुङगिएको भन्दै निर्वाचन प्रकृया पुन शुरु भएको सुचना सार्वजनिक गरियो । यो जत्तिको गैर-जिम्मेवारपन अरु केहि होला ? अझै बिडम्बना त के छ भने शुक्रवारको एनआरएनको बोर्ड बैठकले गठन गरेको शक्तिशाली वार्ता कमिटी जस्ले गरेको निर्णयले सोझै बोर्ड बैठकको निर्णयको मान्यता पाउँथ्यो, उक्त टोली सँगको कुराकानी स्वरुप जानकारीको प्रतिक्षा गरिरहँदा नेपालका ठुला राजनीतिक संगठनका प्रवासी भातृ संगठनहरुका नेताहरुबाट सोझो निर्बिरोध पदको अफर प्राप्त हुँदा हामी छाँगोबाट खसे जस्ता बन्यौ । हाम्रो बिरोध पद्धतिको नाममा कुनै एक जना सदस्यलाई एनआरएनमा पठाउनु होईन । संस्था पद्धतिमा चले सबैले स्वयसेवी रुपमा संस्थामा गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हो भने संस्थाले गर्ने निर्णयहरुमा संस्था र यसका सदस्यहरुको हित हेरिनु पर्छ, अमुक व्यक्ति र संस्थाको स्वार्थ केन्द्रित हुनु हुदैन ।
हाम्रो यो अभियानमा न त जन सम्पर्क समिति भन्ने नामको राजनीतिक संगठनको संलग्नता छ न त प्रवासी सँघको । मानिस राजनितिक प्राणी हो र उसको राजनीतिक चेतलाई सम्मान गर्नु पर्छ । तर उठाईएको मुद्धा कुनै राजनीतिक चेष्टाले प्रेरित छैन, त्यसमा जबरजस्ती राजनीतिक रंग दिएर भ्रम फैलाईएको छ, हाम्रो घोर आपत्ति छ ।
जुलाई १७ गते, उम्मेदवारी दर्ताको दिन, दिन भर हरेक तरहमा प्रयासहरु भए । मध्यमार्ग खोज्ने देखी कस्को उम्मेदवारीले समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कसरतहरु पनि भए । ग्रेटर टोरोन्टो बाहिरका साथीहरु पनि यसमा लागि रहे । हामी भनि रह्यौ, तिमीहरुको निर्णय फिर्ता गर, त्यस पछि चुनावी प्रकृयामा जाउँला ।
अन्त्यमा, संस्थाको जुन निर्णयको बिरुद्ध हामी जवाफ खोजी रह्यौ, त्यसको जवाफ नआए पछि न्यायको लागि अदालतको ढोका सम्म पुगेको हौं । अदालतमा संस्था र यसका पदाधिकारिलाई जवाफदेहिताको लागि पुर्याउने पहल शुरु गरि सके पछि यहि व्यबस्था अन्तरगत गराईने निर्वाचन र वार्षीक साधारण सभामा सहभागी हुनुको औचित्य समाप्त भैसकेको छ ।
संस्था सबै गैर‍-आवासिय नेपालीको हो, यो संस्था व्यक्तिको स्वार्थमा हैन पद्धतिबाट चल्छ भन्ने आभाष सबैलाई होस भन्ने कामना गर्दछौ ।
एकता अभियानका सम्पुर्ण सदस्यहरु
एन आर एन क्यानडाको क्षेत्र निर्धारण बिबाद अदालतमा, समाधान निकाल्न…
प्रकाशमान सँग रविन्द्र मिश्र भिड्ने
यस्ता परिचय खुल्ने कागजात भए भोट हाल्न पाइने
कांग्रेस र नयाँ शक्तिबीच चुनावी तालमेल
बागी फकाउँदै बागलुङका वाम गठबन्धन, काँग्रेसलाई आफ्नैको डर
प्रदेश र केन्द्रको क्षेत्र निर्धारण
एन आर एन क्यानडाको क्षेत्र निर्धारण बिबाद अदालतमा, समाधान निकाल्न… टाेराेन्टाे, १७ जुलाइ एन आर एन क्यानडाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण…